ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အိုမင်းလက်ဖက်ရည် မှအရည်အသွေးမြင့် အိုမင်းလက်ဖက်ရည် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan နှင့် suppling နှင့်တင်ပို့, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် အိုမင်းလက်ဖက်ရည်။ တစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံအများအပြားနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြ Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြားနာမည်ကောင်းကိုခံစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှာခြင်းငှါရှိသမျှသောလောကီအစိတ်အပိုင်းများမှဖောက်သည်များ, စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်မိတ်ဆွေများကြိုဆိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အိုမင်းလက်ဖက်ရည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အိုမင်းလက်ဖက်ရည် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အိုမင်းလက်ဖက်ရည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Alishan Alpine သစ်ပင်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် ကိုယ်ပိုင် Alishan လက်ဖက်စိုက်ခင်း ထိုင်ဝမ်’ရှားပါးဇာတိလက်ဖက်ခြောက်မျိုးစိတ် ရှေးဟောင်းအနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်၏လက်ဖက်ရည်သည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်တောက်ပသည် အထူးလက်ဖက်ရနံ့ လက်ဖက်ရည်သည်အထူရှိပြီးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် အနံ့ကရှည်တယ်-တည်မြဲသော,နှင့်အရသာစင်ကြယ်သောချိုမြိန်သည်,အရာအဆုံးမဲ့ aftertaste ဖြစ်ပါတယ် ထိုင်ဝမ်ရှိအလီရှန်သည်ထိုင်ဝမ်၏အဓိကတောင်တန်းငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်.၎င်းသည် Yushan တောင်တန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောဖြန့်ဖြူးမှုရှိသည်.မြင့်မားသောအမြင့်နှင့် Alishan လက်ဖက်ခြောက်ofရိယာ၏နက်ရှိုင်းသောတောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသည်,လေကလတ်ဆတ်တယ်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,စိုစွတ်,တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းသောနှင့်မိုးရာသီ.စိုက်ပျိုးခြင်းမှ,လက်ရိတ်သိမ်းဖို့မွေးမြူရေး,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာနှင့်အတူ,လက်ဖက်ရွက်များသည်ပျော့ပျောင်းသည်,အရွက်အသားထူသည်,Alishan တောင်သည်မြင့်၏.လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်၏ချိုမြိန်သောအရသာသည်ထိပ်တန်းလက်ဖက်ခြောက်၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်. ပါဝင်ပစ္စည်းများ:Alishan Alpine ရှေးပင်ပင်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် စွမ်းရည်:၇၅ ဂရမ်/လုပ်နိုင် သိုလှောင်ချိန်:တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
High Mountain အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်
Alishan High Mountain အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် ကိုယ်ပိုင် Alishan လက်ဖက်စိုက်ခင်း Alishan လက်ဖက်ခြောက်inရိယာတွင်အမြင့် ၁၃၀၀ မှ ၁၅၀၀ မီတာအထိထုတ်လုပ်သည် ထိုင်ဝမ်အမြင့်ဆုံးမှလုပ်-လက်ဖက်ရည်အမြင့် Oolong မြင့်မားသောတောင်ကြီး oolong ၏ထူးခြားသောအမွှေးအကြိုင်သည်လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်နှင့်အပူကိုက်ညီသည် အဆိုပါလက်ဖက်ရည်ဟင်းချိုစအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်,ပျားရည်နှင့်ချိုမြိန်အရသာ,နှင့်နူးညံ့ချောမွေ့အရသာ. ・ကဗျာကိုပြီးနောက်,လည်ချောင်း rhyme ခန္ဓာကိုယ်အရည်ထုတ်လုပ်သည်,ပါးစပ်နှင့်သွားများသည်အမွှေးနံ့သာရှိသည်. ထိပ်တန်းထိုင်ဝမ်မြင့်သော Alishan အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်! ထိုင်ဝမ်ရှိအလီရှန်သည်ထိုင်ဝမ်၏အဓိကတောင်တန်းငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်.၎င်းသည် Yushan တောင်တန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောဖြန့်ဖြူးမှုရှိသည်.မြင့်မားသောအမြင့်နှင့် Alishan လက်ဖက်ခြောက်ofရိယာ၏နက်ရှိုင်းသောတောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသည်,လေကလတ်ဆတ်တယ်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,စိုစွတ်,တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းသောနှင့်မိုးရာသီ.စိုက်ပျိုးခြင်းမှ,လက်ရိတ်သိမ်းဖို့မွေးမြူရေး,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာနှင့်အတူ,လက်ဖက်ရွက်များသည်ပျော့ပျောင်းသည်,အရွက်အသားထူသည်,Alishan တောင်သည်မြင့်၏.လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်၏ချိုမြိန်သောအရသာသည်ထိပ်တန်းလက်ဖက်ခြောက်၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်. ပါဝင်ပစ္စည်းများ:Alishan မြင့်သောတောင်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် စွမ်းရည်:၁၀၀ ဂရမ်/လုပ်နိုင် သိုလှောင်ချိန်:တစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
Black Tea လက်ဖက်ခြောက်အိတ်များ
Alishan မြင့်မားသောတောင်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်အိတ် ကိုယ်ပိုင်လက်ဖက်ခြောက်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Alishan ပျားရည်အမွှေးအကြိုင်လက်ဖက်ခြောက် ချိုသောအချိုနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်တို့၏ပေါင်းစပ်မှု ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာ,ချောချောမွေ့မွေ့. သင်နှင့်အတူထုပ်ပိုး,လက်ဖက်ရည်သောက်ကောင်းသောက်ပါ,ဘယ်နေရာမဆို ထိုင်ဝမ်ရှိအလီရှန်သည်ထိုင်ဝမ်၏အဓိကတောင်တန်းငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်.၎င်းသည် Yushan တောင်တန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောဖြန့်ဖြူးမှုရှိသည်.မြင့်မားသောအမြင့်နှင့် Alishan လက်ဖက်ခြောက်ofရိယာ၏နက်ရှိုင်းသောတောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသည်,လေကလတ်ဆတ်တယ်,ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့,စိုစွတ်,တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြူဆိုင်းသောနှင့်မိုးရာသီ.စိုက်ပျိုးခြင်းမှ,လက်ရိတ်သိမ်းဖို့မွေးမြူရေး,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာနှင့်အတူ,လက်ဖက်ရွက်များသည်ပျော့ပျောင်းသည်,အရွက်အသားထူသည်,Alishan တောင်သည်မြင့်၏.လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်၏ချိုမြိန်သောအရသာသည်ထိပ်တန်းလက်ဖက်ခြောက်၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်. ပါဝင်ပစ္စည်းများ:Alishan မြင့်မားသောတောင်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်အိတ် စွမ်းရည်:၂.5 gx 20 အထုပ်/သတျတော သိုလှောင်ချိန်:နှစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Alishan,ထိုင်ဝမ်
Lishan တောင်တန်းလက်ဖက်ခြောက် ရီးရဲလ် Lishan မြင့်သောတောင်ပေါ်လက်ဖက်ခြောက် မြင့်မားသော Sieving-အရည်အသွေးမြင့် Lishan မြင့်မားသောတောင်ပေါ်လက်ဖက်ရည်ထောင့်မြင့်မားစေရန်-အရည်အသွေးမြင့်မားသောလက်ဖက်ခြောက်များ ကြွယ်ဝသောအနံ့နှင့်ပါးစပ်ပေါ်တွင်ချိုမြိန်အရသာ သင်နှင့်အတူထုပ်ပိုး,လက်ဖက်ရည်သောက်ကောင်းသောက်ပါ,ဘယ်နေရာမဆို လီရှန်လက်ဖက်areaရိယာသည်အမြင့် ၁၆၀၀ မှ ၂၆၀၀ မီတာအထိရှိသည်,ထိုင်ဝမ်မှာအများဆုံးပျမ်းမျှလက်ဖက်ရည်areaရိယာဖြစ်ပါတယ်.မြင့်မားသောတောင်ပေါ်လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်လုပ်မှုသည်ညွှန်းကိန်းအဆင့်ရှိသည်.လက်ဖက်ရည်areaရိယာ၌နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်,လက်ဖက်ရည် cyanine ဖွဲ့စည်းပုံပိုထူသည်,နှင့်အရသာပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်.မြင့်သောအမြင့်အပြင်,လက်ဖက်ရည်တွင်ခိုင်မာပြီးသဘာဝအရသာရှိသည်. ပါဝင်ပစ္စည်းများ:Lishan တောင်လက်ဖက်ခြောက် စွမ်းရည်:၂.5 gx 20 အထုပ်/သတျတော သိုလှောင်ချိန်:နှစ်နှစ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်:အထုပ်အပေါ်မှတ်သား မူလနေရာ:Lishan,ထိုင်ဝမ်
နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန်ပေးအပ်ခြင်းအပေါ်။ ပိုမိုအသေးစိတ်အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအဘို့, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ရန်နှင့်ကျွန်တော်မကြာခင်သင်ပြန်ပြောလိမ့်မည်ဖတ်ရှုပါ။